Omenala King King Matraasi na Ihe Mgbasasị Box | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ahia nke ihe opupu ihe ubi na-ahụkarị ọdịmma nke mmiri- 佛山市 瑞信无纺布 瑞信无纺布 有限 有限 瑞信无纺布. Otu oge opupu ihe ubi, a na-amata ngwaahịa a na ụlọ ọrụ n'okpuru mmebe nke Rayson. Ngwaahịa na-enye arụmọrụ kwekọrọ na ndị ahịa nwere ike ịtụkwasị obi. Obere oge opupu ihe ubi Ngwaahịa a bụ antibacterial. A na-emeso ndị ọrụ antibacterial nke na-emebi microbialical nhazi ma gbuo mkpụrụ ndụ nke nje.
Rayson etolitela ka ọ bụrụ onye na-emepụta ọkachamara na onye na-eweta ihe a pụrụ ịdabere na ngwaahịa dị elu. Na usoro mmepụta ahụ dum, anyị na-eme ka usoro njikwa usoro nke ọma. Ebe ọ bụ na anyị guzobere, anyị na-agbaso oge niile, njikwa sayensị, na ndozi na-aga n'ihu, ma na-enye ọrụ dị mma iji zute na ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ekwe nkwa na anyị matraasi King King King na igbe igbe ga-eweta ọtụtụ uru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịnata nyocha gị. Eze nha na igbe akwụkwọ anyị ga-eme ike anyị niile ijere ndị ahịa ozi niile site na imewe ngwaahịa, R & D, inyefe. Nnabata ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara matraasi King King King King King Matrali na igbe ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị. Ọ gaghị ajụ na usoro nke ịsa ahụ, mmiri mmiri, mmiri chlorinated, na-ete mmiri, na hydrolysis.